9 Izibalo Zomthelela Wokuhlangenwe nakho Komsebenzisi Weselula | Martech Zone
Izibalo nge-Impact Yesipiliyoni Somsebenzisi Weselula
ULwesibili, May 31, 2016 ULwesibili, May 31, 2016 Douglas Karr
Wake wasesha iwebhusayithi yakho ku-Google futhi wabona ifayela le- Hambayo-Friendly ithegi kuyo? I-Google inayo i- ikhasi lokuhlola eliphathekayo lapho ungabheka khona izingqinamba ngesayithi lakho. Isivivinyo esihle kakhulu esihlaziya izinto futhi senze isiqiniseko sokuthi zihlukaniswe kahle futhi ziyabonakala. Imfono-enobungane ayiyona iselula yenziwe, noma kunjalo. Kumane kuyisisekelo futhi akubheki ukusebenza kwangempela kwabasebenzisi beselula kusayithi lakho.
Wonke umnikazi webhizinisi lesimanje maduze ngeke abe nokukhetha — kufanele ube nokuqina okukhona ku-inthanethi, hhayi nje ukusiza amakhasimende akho angomahamba nendlwana, kodwa ukutholwa yiwo kuqala! URahul Alim, CustomCreatives.com
A iwebhusayithi ephendulayo lokho okulungiselelwe umsebenzisi weselula kunezinzuzo ezinhle kakhulu. Okokuqala, umsebenzisi ovakashela bobabili nge-desktop nangeselula uzoba nokuhlangenwe nakho okufanayo, okubenza bakwazi ukuzulazula futhi bathole imininingwane abayidingayo kalula. Okwesibili, ukufaka uphawu lokumaka kuzofanelana kahle. Okwesithathu, isayithi lingalayisha ngokushesha… kunokuba liqondise kabusha ithrafikhi, i-CSS iyaphakamisa.
Kungani uchitha isikhathi ekusebenzeni okuhle kweselula? Nazi izibalo eziyi-9 ezifakazela ukubuya kotshalo-mali ekusebenziseni isipiliyoni sakho seselula:
Ama-33% wakho konke ukuthengisa okungaba khona kwehluleka lapho iwebhusayithi yebhizinisi 'ingathuthukisiwe
Abantu abangama-40% bazosesha elinye isayithi uma umphumela wokuqala ungenziwanga ngeselula
Ama-45% abantu abaneminyaka engu-18-20 basebenzisa i-smartphone yabo ukusesha online nsuku zonke
Abathengi abangama-80% baqeda okungenani ukuthenga kwabo nge-smartphone njalo ngenyanga
Ama-67% abo bonke abanikazi befoni ephathekayo basebenzisa i-smartphone yabo ukubhekabheka kuwebhu
Ama-25% wabasebenzisi be-inthanethi e-US bangena kuphela kuwebhu ngomakhalekhukhwini
Ama-61% wabathengi banombono ongcono wezinkampani ezinolwazi oluhle lweselula
Abantu abangama-57% ngeke bancome ibhizinisi uma linamasayithi weselula angaphansi kokulingene
I-70% yakho konke ukusesha okungahambisani ne-inthanethi kuholela ekutheni umthengi athathe isenzo kungakapheli ihora
Tags: design mobileukwakhiwa kweselulanokwenza kahle kweselulamobile ephendulayoizibalo zeselulaizibalo zokusetshenziswa kweselulaisipiliyoni somsebenzisi weselulaiselula ephatumklamo ophendulayo
UJun 6, 2016 ngo-9: 04 AM
Kubonakala sengathi iningi lale datha lihlehlela emuva ku-2013-2014 (isitayela esihle sendawo yobuchwepheshe esheshayo, eshintsha njalo). Zikhona ezinye izibalo zakamuva?
Mina Mina Dixie K.
Jul 2, 2016 ku-2: 22 AM
Sawubona Douglas, ubukhona beselula kufanele kunoma yiliphi ibhizinisi, kusho iqiniso. Akukhulisi nje kuphela imakethe ebhekiswe kubo futhi kuyabasiza kepha futhi kungakuhle kakhulu ukuthola abasebenzisi abasha abazotholwa yibo kuqala. Njengoba noma yiliphi ibhizinisi kufanele libe ngamakhasimende ukuze liphumelele, amawebhusayithi alungele ukuhanjwa nawo kufanele emhlabeni abe yidijithali usuku nosuku. Ngiyabonga kakhulu!